Ciidamo ka tirsan Booliska oo tababar loo xiray iyo Lebis cusub oo la siiyay | raascasayrmedia.com
← Afhayeenka Xarrakatul Shabaabul Mujaahidiin Sheekh Cali Maxamuud Raage (Sheekh Cali Dheere) oo shir jaraa’id u qabtay Saxaafadda ayaa sheegay inay joojiyeen xiriirkii kala dhexeeyay Telefishinka Universal ee ku hadla Afka Soomaaiga.
Bulshawaynta reer casayrland oo xukuumada puntland iyo hay,adaha samafalkaba ku eedeyay inaysan wax gurmad ah lasoo gaarin dadkii ku dhibaatoobay roobabkii dhawaan ka da,ay degaankaas. →
May 30, 2010 · 4:35 pm
Ciidamo ka tirsan Booliska oo tababar loo xiray iyo Lebis cusub oo la siiyay
Ciidamo Booliis ah oo maanta tababar loogu soo gebageeyay xarunta Iskuul boliisiya ee Magaalada Muqdisho, iyadoo ciidamada Booliiska Soomaaliyeedna ay maanta wixii ka bilowda ay ku howlgelidoonaan labis cusub.
Tababarkan maanta loo soo xiray ciidamo ka tirsan kuwa booliska Soomaaliya ayaa xafladdii lagu soo geba gebeeynayay waxaa ka soo qayb galay wasiirka arimaha gudaha, wasaiirka awqaaafta iyo arimaha diinta, taliyahaya ciidanka boliiska Soomaaliyeeed iyo taliyaasha tababarka bixinaysay .
Ciidankaan maanta tabarka loo soo xiray oo gaaraya 380 askeri ayaa waxa ay yihiin ciidamo horay tababar ugu so qaatay kulyadda Carmo ka dibna mudo 30 bilood ah tababar ku dhameeystay iskuulka sare ee booliiska.
Taliyaha ciidanka Baliiska General Cali Maxamed Xasan looyaan oo ugu horrayn munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay in munaasaddan ay xanbaarsan tahay laba qaybood oo kala ah tababarka ciidanka loo soo xirayo iyo in ciidamada boliiska Soomaaliyeed ay wixii maanta ka billaawdo ay ku howl gelidoonaan labis cusub oo ka kooban shaati buluug ah iyo surwaal madow ah.
Sidoo kale wasiirka arimaha gudaha xukuumadda KMG ah ee Soomaaliya Sh. C/qaadir Cali Cumar oo munaasabadda hadalo guubaabo u badan ka jeediyay ayaa sheegay in ciidamada looga baahan yahay in ay dhowraan islamarkaana ay ilaaliyaan astaamaha Qaranka Somaaliyeed sida diinta,dadka, ciidda iyo calanka
Waxa uu sheegay in ciidamda laga sugayo in ay meel iska dhigaan waxyaabaha keeni kara xan ciidamada loo jeediyo,
Sidoo kale wasiirka awqaafta iyo arimaha diinta sh. Nuur Cali Adan ayaa ayaa uu sheegay in ciidamadu ay yihiin ilaalada Qaranka iyo xurmada umadda Soomaaliyeed taasina ay kaliya ku imaan karo in la ilaalyo sharafta ciidanka boolisska, waxa uuna kula dardaarmay ciidamada Booliiska Soomaaliyeen in ay soo celiyaan sharaftii iyo heynadii ay ku dhex lahaayeen bulshada weynta Soomaaliyeed.